မေ့လိုက်ပါ အရင်က ဇာတ်လမ်းလေး | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » မေ့လိုက်ပါ အရင်က ဇာတ်လမ်းလေး
မေ့လိုက်ပါ အရင်က ဇာတ်လမ်းလေး
Posted by moonpoem on Jun 7, 2014 in Creative Writing | 11 comments
ရှင့်ကို ကျွန်မ တကယ်ကို စိတ်တိုတယ် သိလား။ကျွန်မဓာတ်ပုံ Upload တင်တာကျ Like မလုပ်ဘဲမေမြတ်နိုးတို့ မိုးစက်ဝိုင်တို့ Status တင်ရင်ကျတော့ Comment ၀င်ဝင်ပေးနေတာလေ ကျွန်မ မသိဘူးများ ထင်နေလား။ပြီးတော့ အရေးကြီးတဲ့ သတင်းတွေ Post ကိုကျတော့ Share မယ် မရှိဘူး။
ရှင့်သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ လျှောက်သွား၊ သွားသမျှနေရာ Check-in ၀င်ပြီး ဟိုလူဒီလူ Tagged လုပ်ဖို့ ပဲ စဉ်းစားနေတယ်။သတင်းကလည်း ရပြီးသားနော်။ဘာတဲ့ အရက်ကြိုက်တတ်သူများGroup တို ငမ်းချင်ရင် ဒီကိုလာ Group ဆိုတာတွေလျှောက်ဖွဲ့ ပြီး ပေါက်တတ်ကရတွေ လုပ်နေတာတဲ့။အမလေးလေး ရှင်က Group ၀င်တဲ့သူသာ Notification ၀င်မယ့် Setting ချိန်ထားတယ်ဆိုပြီး ကျွန်မကို လျှော့တွက်တာကိုး။ကျွန်မကလည်း ရှင့်အကြောင်း နောကျေနေလို့ Account Name အသစ်တစ်ခုကို Male
အနေနဲ့ ဖွင့်ပြီး ရှင့်Groupထဲမှာ ၀င်ထားတာလေ။
ရှင်ကအခုတော့ Facebook သူငယ်ချင်းတွေ အလယ်မှာ အရှက် ဗြန်းဗြန်းကွဲရတယ်ဆိုပြီး ကျွန်မကိုEnd of Relationship လုပ်ပစ်ရက်တယ်ပေါ့။ကျွန်မလည်း အခု ဖေ့ဘွတ်စ် ၀င်ဖြစ်ရင်တောင် ရှင့်ရဲ့ 
News Feed တွေ မြင်တာနဲ့မကြည့်ဖြစ်အောင်လို့ ချက်ချင်း Log Out လုပ်ပစ်လိုက်တယ်။ကျွန်မ Account တစ်ခုလုံးကို Deactivateလုပ်ပစ်ရအောင်ထိတော့ ကျွန်မ FACEရူးရဲ အဲဆောရီး မိုက်ရူးရဲ မဆန်သေးဘူး။ရှင်ကလည်း Cover Photo ပြောင်းသလို ကျွန်မလည်းအခု
ဖေ့ဘုတ် သရဲမှန်းသိသာအောင်ကို ဖန်းရှင်တွေ အကုန်စုံသွားဘီ။
မဘလော့ချင်ရင် ရီစထရစ် လုပ်ထားလို့ရပြီးးးးး
သူ့ နိုတီမှန်သမျှ သိချင်ရင် ကလို့(စ) ဖရန့်လေး လုပ်ထားလိုက်ပေါ့။
နာမည် ခေါ်တာနဲ့ တင် သေလောက်တယ်ကွယ်…။
အော်အော် ပညာရှင်အဆင့်ပါလားကွယ်ရို…. တော်မှတော်..
ဟန်မပျက်လေးပဲ သူမမြင်ရအောင် custom လုပ်ထားလိုက်တာတို့
chat မှာ တစ်ယောက်ထဲ ကွက်ပြီး ပိတ်ထားတာတို့ လုပ်ဖူးလား ဟင်
ဦးကိုမေးဟမ်းပါ.နောက်များ…. ဦးဦးက ချစ်ရေးချစ်ရာ သုခမိန်….ဖြစ်တဲ့ပြသနာသာပြော…ဖြေရှင်းပေးမယ်…အဟိဟိဟိ …
တစ်ရွာလုံးအသိအမှတ်ပြု … အချစ်ကွန်ဆားတန့် … ကချင်နုထွားကြီး ….
ကွန်ဆားတန့်က အကြွားတွေများနေလို့ ပတ်ပြေးနေခြင်း ဖြစ်ပါကြောင်း
…အဲ့တော့ …နင့်အပူပါလား တဂျားပုရဲ့ …
ကချင်နုထွားကြီး ( မေတ္တာရှင် )
( သုံးသိန်းတန်ဖိနပ်ပေါက်နေရင်းက အံကြိတ်ပြီး မန့်တီ. ) အငိငိငိ
င်္FB သာသုံးနေတာ FBက ဖန်ရှင်တွေ သိပ်မသိလှဘူး